Mhara (Impala in English and Afrikaans) imhuka yemusango inoda kuenzana nemhembwe. Mhara inobva mumhuri yemombe; inosanganisira mombe dzepamusha, hwai, mbudzi nenyati. Mhuka iyi inowanikwa mumasango enyika dzinoti Kenya, Tanzania, Swaziland, Mozambique, kumaodzanyemba kweNamibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, kuchamhembe kweAngola, South Africa and Uganda. Huwandu hwe Mhara muAfrica hunodarika 2 million.
Kana Mhara dzichinge dzavhundutswa nezvikara dzniotanga kusvetuka dzichiita udasvumutasvu dziine chinagwa chokuvhiringidza zvikara. Mhara inokwanisa kukwakuka nhambwe inosvika 10m ichikwira 3m mudenga. Mhara dzinomhaya kusvika 80 km/h kana dzotiza zvikara. Panguva yokutiza dzinomwaya hwema kubva mumakumbo adzo, zvichiyamura kuti danga remhara rirambe riri pamwe.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mhara&oldid=62064"
Last edited on 21 Zvita 2018, at 16:37
This page was last edited on 21 Zvita 2018, at 16:37.